Database ubaahan in la dayactiro ama ma ahan Faylka Xogta
Bogga ugu weyn Products DataNumen Access Repair Macluumaadka 'filename.mdb' wuxuu u baahan yahay in la dayactiro ama maahan faylka keydka macluumaadka.
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "Database u baahan in la dayactiro ama ma aha Faylka Database" Khalad
Markaad isticmaaleyso Microsoft Access si aad u furto faylka keydka xogta kaydsan, waxaad marka hore aragtaa farriinta khaladka soo socda:
Macluumaadka 'filename.mdb' wuxuu u baahan yahay in la dayactiro ama maahan faylka keydka macluumaadka.
Adiga ama isticmaale kale ayaa laga yaabaa inaad si lama filaan ah uga baxdaan Microsoft Office Access inta uu furan yahay keydka Microsoft Office Access.
Ma rabtaa in Microsoft Office Access ay isku daydo inay dayactirto keydka macluumaadka?
meesha 'filename.mdb' waa magaca faylka Gaaritaanka MDB ee la furayo.
Shaashadda shaashadda ayaa u eg sidan:
Waxaad riixi kartaa "Haa" badhanka si aad ugu oggolaato Helitaanka dayactirka keydka. Haddii Microsoft Office Access uu ku guuldareysto inuu dayactiro keydka macluumaadka khaldan, wuxuu soo bandhigi doonaa farriinta khaladka soo socda:
Qaabka keydka xogta ee aan la aqoonsan 'filename.mdb'
Shaashadda ayaa u eg sidan:
Oo waxaad gujin kartaa badhanka "OK" oo waxaad arki kartaa farriinta qaladka saddexaad:
Diiwaanka 'filename.mdb' lama hagaajin karo ama ma ahan faylka keydka xogta Microsoft Office Access.
taas oo macnaheedu yahay Microsoft Office Access ayaa isku dayday intii karaankeeda ah laakiin wali ma hagaajin karto feylka.
Kani waa khayaano Microsoft Jet iyo DAO ah oo qaladku waa 2239.
Khaladkan macnihiisu waxa weeye in mashiinka Access Jet uu aqoonsan karo qaabdhismeedka aasaasiga ah iyo qeexitaannada muhiimka ah ee keydka xogta MDB si guul leh, laakiin wuxuu ka heli karaa xoogaa musuqmaasuq qeexidda miiska ama xogta miiska.
Microsoft Access waxay isku dayi doontaa inay hagaajiso musuqmaasuqa. Haddii qeexitaannada jadwalka muhiimka u ah xogta oo dhan aan la hagaajin karin, waxay soo bandhigi doontaa "Foomka Xogta Aan La Aqoonsanin" markale oo iska soo rida hawlgalka furan.
Waxaad isku dayi kartaa badeecadeena DataNumen Access Repair si loo hagaajiyo feylka MDB loona xaliyo qaladkan.
Muunad fayl MDB ah oo musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. mydb_2.mdb
Faylka ayaa lagu hagaajiyay DataNumen Access Repair: mydb_2_fix.mdb (Miiska 'Recovered_Table2' ee feylka la hagaajiyay ee u dhigma miiska 'Shaqaalaha' ee faylka aan waxyeelloobin)
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.6 ayaa la sii daayay Sebtember 2, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.6 waxaa la sii daayay 30 Luulyo, 2021
DataNumen Outlook Repair 8.6 waxaa la sii daayay 10 Luulyo, 2021